Umshini Wokukhishwa Kukagesi Ugesi - Abakhiqizi Bomshini Wokukhishwa Kukagesi kagesi, abahlinzeki
Imodeli: CNC-50G Usayizi Wethebula: 850 * 450mm Usayizi Wesiqukathi Sikawoyela: 1370 * 720 * 450mm X / Y / Z Axis Travel: 500 * 400 * 300mm Max.load Of Electrode Head: 150kg Max.load Of Table: 1800kg Net Isisindo: 2500kg Dimension: 2300 * 2770 * 2650mm Efficiency mirror mirror discharge machine CNC-50G for mold processing 1. Isakhiwo somzimba womshini esineziqubu eziphambili zokucindezelwa kwesihlabathi se-resin. 2. Ukwamukela ngokunemba CAD design kanye ngokunemba high Uhlaka isakhiwo. 3. X, Y ama-ekseli anyakaza ebusweni nge “TU ...
I-Ultra Fine Surface Procssing CNC EDM Machine 700 * 400mm Usayizi Wethebula CNC450
Imodeli: CNC-40G Usayizi Wethebula: 700 * 400mm Usayizi Wesiqukathi Sikawoyela: 1130 * 710 * 450mm X / Y / Z Axis Travel: 400 * 300 * 300mm Max.load Of Electrode Head: 620kg Max.load Of Table: 1000kg Net Isisindo: 2000kg Dimension: 2050 * 2530 * 2400mm Isibuko sokusebenza kahle komshini wokukhipha ugesi i-CNC-40G yokucubungula isikhunta 1. Esitebeleni se-ultra high precidion molds nezingxenye zokulungiswa. 2.U-class high quality ultra-fine procssing surface, ukulahleka okuphansi, ukuphela okuphezulu. 3. Isetshenziselwa ukucubungula izingxenye eziyinkimbinkimbi ezigobile, ukucacisa ...
Umshini Wokunemba Kwe-HIgh Industrial Spark Erosion Machine 17000 Kilograms Isisindo Esiphakeme
Imodeli: I-CNC2590N Ithebula Lokuhamba: 2500 * 900 * 600mm Usayizi Wesitsha Sikawoyela: 3800 * 1800 * 650mm Usayizi Wethebula: 2700 * 1200mm Max. Umthwalo Wethebula: 10000kgs Isisindo Esilungile: Umshini we-17000kg CNC EDM CNC2590N 1. Usebenze njengeZinga Lokuqapha Elizenzakalelayo, Ukuthola ilangabi elibomvu le-infra-red, i-alamu yokujula nokusika ugesi, ukuthola iphuzu eliphakathi. 2. Yamukela i-electrocircuit ye-MOSFET, ngokucutshungulwa kwejubane eliphezulu 3. Yiba nomsebenzi wokushintsha omuhle. Imisebenzi yokulwa nokulwa nayo ingangezelelwa ukwenza ...
I-3890 * 4400 * 3580mm i-Electronica EDM Machine Isivinini Esicubungula Ngokucutha
Imodeli: CNC1880N Ithebula Lezokuvakasha: 1800 * 800 * 600mm Usayizi We-Isitsha Samafutha: 3000 * 1500 ** 650mm Usayizi Wethebula: 2000 * 1000mm Max. Umthwalo Wethebula: 6500kgs Isisindo Esilungile: 13000kg CNC EDM umshini CNC1880N 1. Unemisebenzi efana ne-Automatic Monitoring Level, ukutholwa kwelangabi elibomvu kwe-infra-red, i-alamu yokujula nokusika ugesi, ukuthola iphuzu eliphakathi. 2. Yamukela i-electrocircuit ye-MOSFET, ngokucubungula ngejubane eliphezulu, kanye nokulahleka okuphansi kwe-electrode 3. Yiba nomsebenzi wokushintsha okuhle. I-anti-fightin ...
Okuzenzakalelayo CNC EDM Machine 4340 * 4900 * 3590mm With 8000kgs Max Layisha Of Ithebula
Imodeli: I-CNC2110N Ithebula Lokuhamba: 2300 * 900 * 600mm Usayizi Wesitsha Sikawoyela: 3500 * 1800 * 650mm Usayizi Wethebula: 2500 * 1200mm Max. Umthwalo Wethebula: Ama-8000kgs Isisindo Esisodwa: Umshini we-15000kg we-CNC EDM i-CNC1880N 1. Unemisebenzi efana neleveli yokuqapha okuzenzakalelayo, ukutholwa kwelangabi elibomvu kwe-infra-red, i-alamu yokujula nokusika ugesi, ukuthola iphuzu eliphakathi. 2. Yamukela i-electrocircuit ye-MOSFET, ngokucubungula ngejubane eliphezulu, kanye nokulahleka okuphansi kwe-electrode 3. Yiba nomsebenzi wokushintsha okuhle. Ukulwa ...
Imishini emithathu ye-Axis CNC EDM, 2000 * 1300 * 700mm Oil Container EDM Machine
Imodeli: I-CNC1260N Ithebula Lokuhamba: 1200 * 600 * 450mm Usayizi Wesiqukathi Sikawoyela: 2000 * 1300 * 700mm Usayizi Wethebula: 1250 * 800mm Max. Umthwalo we-Eletrode Head: 300kgs Isisindo Esisodwa: 5500kg Three Axis CNC EDM Machine, 2000 * 1300 * 700mm Oil Container EDM Cutting Machine 1.High rigidity, high precision, high quality. 2. Lapho ukufakwa kwemishini kufinyelelwa ekujuleni okufisayo, kuzoqhubeka kusebenze inqubo yenqubo enhle. 3. zonke izesekeli zikagesi zinomsebenzi omuhle nekhwalithi ye-4.Ukujula kuhlala kungashintshi, kube ...
Umshini we-2000L Womshini we-CNC EDM, Umshini We-Industrial PC Isilawuli Sikagesi Sokushisa
Imodeli: I-CNC850N Ithebula Lokuhamba: 800 * 500 * 400mm Uhlobo Lwemodeli: I-CNC EDM Usayizi Womshini Wesitsha Samafutha: 1650 * 1100 * 600mm Usayizi Wethebula: 1000 * 600mm Max. Umthwalo we-Eletrode Head: 200kgs 1000 * 600mm usayizi wethebula umshini we-EDM CNC850N onezimboni ze-PC isilawuli 1.all imodeli imishini yezindlela ezingavumelana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. 2. Lapho ukufakwa kwemishini kufinyelelwa ekujuleni okufisayo, kuzoqhubeka kusebenze inqubo yenqubo enhle. 3. Ikhompiyutha ezenzakalelayo, i-mesh nokulungiswa - Okwenzelwe imishini ngokubanzi, ...
Okuzenzakalelayo Spark Erosion CNC Sinker EDM Nge 2300 * 2770 * 2650mm Dimension
Imodeli: I-CNC540N Ithebula Lezokuvakasha: 500 * 400 * 300mm Uhlobo Lwemodeli: Usayizi Wethebula Lomshini we-CNC EDM: 800 * 450mm Umthwalo Wetafula Elikhulu: Ama-1800kgs Umthwalo Omkhulu We-Electrode Head: 150kgs Automatic Spark Erosion CNC Sinker EDM With 2300 * 2770 * 2650mm Dimension 1 Izindlela ezahlukahlukene zokuchofoza ezingahambisana nezidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. 2.Ukuqina okuhle kakhulu kubonga esakhiweni sokusebenza esingaguquki esisuselwa kuyo lapho imbazo ihamba ngokuzimela ekusekelweni. 3. Ikhompiyutha ezenzekelayo, i-mesh nokulungiswa - Okwenzelwe ...